कसरी चिन्ने रातो र सेतो मासु ? « Khabarhub
काठमाडौँ– दशैँमा प्रायः भान्सामा मासु पाक्ने गर्छ । अन्य समयभन्दा दशैँमा मासुका बिभिन्न परिकार खाने गरिन्छ । अझ फूलपातीदेखि पूर्णिमासम्म घरघरमा मासुका विभिन्न परिकारहरू बन्छन् । तर दशैंमा कस्तो मासु खाने त ? यसबारे तपाईंलाई जानकारी छ ?
चिकित्सकका अनुसार स्वास्थ्यकालागि रातोभन्दा सेतो मासु फाइदाजनक मानिन्छ । सेतो मासु भनेको पक्षींजन्य मासु हो । अझ युरिक एसिड भएको बिरामीले त रातो मासु खानु हुदैँन । माछा र कुखुराबाहेक सबै खालका मासुलाई रातो मासु भनिन्छ ।
सामान्यतया स्तनधारी जनावरको मासुलाई रातो मासु भनिन्छ तर मासुकालागि काटिने जनावरको उमेर अनुसार पनि रातो र सेतो मासु भनिन्छ ।
बयस्क बङ्गुरको मासुलाई रातो मासु भनिन्छ भने कम उमेरको बङ्गुरको मासुलाई सेतो मासु भनिन्छ । रातो मासु हुने पशुमा खसी बोका, भेडा बाख्रा, भैँसी राँगा पर्छन भने पन्छीमा हाँस, कोयली, परेवा, सुतुर्मुर्ग तथा जङ्गली जनावरहरू (मृग, हरिण आदि) हुन् । एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७८, बिहीबार २ : १० बजे
ओलीको सम्बोधनलाई टिप्पणी गर्दै सांसद् थापाले भने, आवेग र कुण्ठामा सहानुभूति मात्रै दिन सकिन्छ
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगनकुमार थापाले प्रश्नको जवाफ दिन सकिने
उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावविरुद्ध रूस र चीनको भिटो
काठमाडौँ- उत्तर कोरियाविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले सुरक्षा परिषद्मा प्रस्तुत
सरकारको नीति कार्यक्रम ‘चौबाटोको बटुवा’ र ‘कुहिरोको काग’– गोकर्ण विष्ट
काठमाडौँ– नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारको नीति
राप्रपा स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै लडेको हो : अध्यक्ष लिङ्देन
मोरङ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले स्थानीय तह निर्वाचनमा
जुन १ बाट सांघाईमा लकडाउन हट्दै
काठमाडौँ- दुई महिनादेखि कोभिड–१९ को लकडाउनबाट गुज्रेको चीनको सांघाई महानगरलाई